Iimfuno ezine: Indlela iFomathi yeGalufa edlalwa ngayo
Ukuchaza Ifom yeGalofu esetyenzisiwe kwiNdebe yeRyder, edlalwa kwiiKlabhu
Iimfuno ze-Foursomes yintsebenzo yokhuphiswano lwegalufu apho iqela liqulethwe ngabagadi begalufu ababini, kwaye abo babini begalufu bafuna ukushaya ibhola yegalufu efanayo. Yingakho ii-Foursomes zibizwa ngokuba zibizwa ngokuthi " enye yombhobho ."
Umdlali wokuqala uyayicima, umdlali wesibili uhlasele inqwelwe yesibini, i-golfer yokuqala ibetha i-shot shot yesithathu, i-golfer yesibili ibetha iphetshana lesine, kwaye njalo kuze kube yilapho ibhola lidibene . Iigolisa ezimbini kwicala elinye liye lishaye i-shot shots ukuze umdlali ofanayo awanqande yonke idrayivu.
Nantsi isicatshulwa seqhinga lesine: Zama ukumisela phambi kweenxa zonke ezona zibopho eziqhubi kakhulu ekuqhubeni. Into yokuba kwisigqibo sokuba ngubani oshaya ibhola le-tee kwibhola yokuqala. Ufuna umqhubi wakho ongcono ukuba ahlasele kwiindawo ezininzi zokuqhubela phambili ezinzima kunokwenzeka. I-golfer ekhupha i-Nombolo 1 iya kuqhubeka idibanisa kwiimingxuma ezingavaliweyo.
Iimfuno ezine kwiSigaba seMhlaba
Kukho amakhulu amafomathi ezemidlalo kunye neendiza ezidlalwa ngabagadi begolfu (kwaye mhlawumbi amakhulu emininzi ehlukeneyo kuloo midlalo), kodwa iimine ezine enye yezona ziyaziwayo.
Kungenxa yokuba abagadi begolfu (kunye nabadlali begalufu abadumile) badlala ama-foursome (njengomdlalo wokudlala) kwezinye iziganeko eziphambili kakhulu:
I-Cup ye-Ryder : I-Foursomes idlalwe kwiNdebe ye-Ryder kuzo zonke iindwendwe, zibuyela ngowokuqala ngo-1927.
I-Solheim Cup : Ii-Foursomes ziyingxenye yazo zonke i-Solheim Cup ukususela ngowokuqala ngo-1990.
I-Cup yoMongameli : Iimfuno ezineziqendu ziye zayingxenye yazo zonke iiMongameli zeNdebe ukusuka ngowokuqala ngo-1994.
Ifomathi yokudlala yemidlalo emine yenzelwe kwakhona kwi-Walker Cup kunye neCrithtis Cup , i-USA kunye ne-Great Britain kunye ne-Ireland iindwendwe zamadoda aphezulu kunye nabasetyhini, ngokulandelanayo.
Stroke Play okanye umdlalo womdlalo
Iimimandla ezine ziyakwazi ukudlalwa njengemidlalo yokudlala okanye umdlalo wokudlala .
Njengoko kuphawuliwe, umdlalo wokudlala umdlalo we-foursomes yinxalenye yecandelo elithile lezakhono ezinkulu kunye neentambo zegalufu zamatye.
Iimfuno ezine-midlalo (umdlalo womdlalo okanye umdlalo wecroke) yifom yeqonga eliqhelekileyo kwi-Great Britain nase-Ireland kwaye idlalwa ngokubanzi kwiintlanga ze-Commonwealth kune-United States. E-USA, ama-foursome ayinto eqhelekileyo kwiklabhu okanye kwinqanaba lokuzonwabisa.
Kodwa umdlalo we-stroke we-foursomes ungenza ifomati yomdlalo wokuzonwabisa, okanye udlalwe iqela labahlobo abane abadibeneyo kumaqela angama-2. Izibetho eziphantsi, ngokucacileyo, kodwa ungasebenzisa iStableford ngokufaka umdlalo wokushaya ngesondo.
Iimfuno ezine kwiMithetho
Yonke iMimiselo esemthethweni kwiGalofu isebenza ngexesha lokudlala emine, kodwa zimbalwa iintlobo ezincinane ezifakwe kwiMithetho 29 , ngoko qiniseka ukuba ukhangele loo nto.
Qaphela ukuba imivimbo yezohlwayo ayichaphazeli i-golfer elandeleni. Umyalelo wokudlala imivimbo ihlala i-ABAB njalo njalo. Ukuba iqela limele lilahle ibhola, umdlali onokujika kulo mdlalo kufuneka alungise ukuwa.
Izibonelelo zempango kwi-Foursomes
Izibonelelo zempembelelo ze-Foursomes zikhutshwe kwi-USGA Manual Handicap Manual, Icandelo 9-4. Khumbula ukuba okokuqala kufuneka uqaphele ukukhubazeka kwezifundo zegolide nganye kwicala.
Ukukhubazeka kwintsebenzo yokhuphiswano lwama-foursomes kuyahluka kuye kuxhomekeke kwifomathi ethile:
Ukudlala umdlalo, 2 vs. 2 : Umdlalo wee-foursomes phakathi kweCandelo A kunye neBanga B, kuqala udibanise nokukhubazeka kwezifundo zabagadi begolisa ngapha. Emva koko shenxise iimeko eziphantsi ezikhuselekileyo ezihlangene nezifo ezidibeneyo, umz., Ukuba i-Side A idibeneyo yokukhubazeka eyi-12 kunye ne-Side B ye-27, isusa 12 ukusuka kwi-27. Thatha ixabiso kwaye uhlule ihafu. Kulo mzekelo, i-27 engaphantsi kwe-12 ilingana ne-15; I-15 ihlukaniswe ngesiqingatha se-7.5, ejikeleza ukuya kuma-8.
Umgaqo-nkqubo we-USGA Handicap uthi ngokucacileyo: "Isibonelelo segumbi elikhuselekile liphezulu ngamaphesenti ama-50 omahluko phakathi kwe-Course Handicap kwicala ngalinye."
Ukudlala umdlalo ngokubhekiselele kwiPar okanye iBogey : Hlanganisa ukukhubazeka kwamaqabane kunye nokwahlula ngesiqingatha.
I-stroke play : Isibonelelo se-Handicap singama-50 ekhulwini ama-disability counts. Ngoko wongeza iimeko zokukhubazeka kunye kunye nokwahlula ngesiqingatha.
Kuzo zonke iimeko, ipesenteji esetyenzisiweyo ekubaleni izibonelelo zabakhubazekile ziyahla ukusuka kuma-50 ekhulwini ukuya kuma-40 ekhulwini xa kuqhutywe imoto ekhethiweyo.
Amanye amagama kwiiFomasine ezineMimandla
Njengoko kuphawulwe phezulu, udweliso oluthile ligama eliqhelekileyo kwifomathi yesine (jonga ividiyo ebonisa enye ifowuni). Ifomathi yezinye ibizwa ngokuba yiScottch Doubles. Iqela eli-2 lomntu eliqulethwe yindoda enye kunye nomfazi omnye ubizwa ngokuba yi "Mixed Foursomes." I-Scotch Foursomes yintlukwano kwifomathi.
Kwaye Intsingiselo Enye Yezinto 'ezinezibonelelo'
Naliphi na iigalufu ezine ezidlala kwiqela elifanayo (kungakhathaliseki ukuba liyiphi indlela edlala ngayo, nokuba kungakhathaliseki ukuba abo babini bahlangene) kwinqanaba lokuzonwabisa lokugcoba libizwa ngokuba "linye" lwegolfu. Eli binzana liqhele kakhulu kwi-United States kunezinye iindawo zehlabathi.
Iiphola ezi-7 eziphezulu zeGolf ze-Absolute Beginners
Ukuhamba ngeSystem System: I-Planet Uranus
I-Ethanol i-Molecular Formula kunye ne-Empirical Formula